Izindiza ezishibhile ngendiza, thenga amathikithi ngentengo enhle! ?
Thola amanani amahle kakhulu ezindizeni nangazo zonke iziqinisekiso sibonga injini yethu yokusesha yezindiza eshibhile.
Ukucinga Ngezindiza Ezishibhile
Kepha kunezinye izinketho kwi-Intanethi, ngakho-ke sikunikeza ukufinyelela kumawebhusayithi asesha kakhulu endiza nokuqhathanisa:
I-Destinia: Ngenxa yale injini yokusesha singathola izindiza ngentengo enhle futhi ngesiqinisekiso esigcwele. Chofoza lapha
I-Rumbo: Injini yokusesha yamahhotela edumile ikunikeza nethuluzi lokuthola izindiza ezishibhile kakhulu. Chofoza lapha.
I-Skyscanner: Enye yezinjini zokusesha ezisetshenziswe kakhulu futhi enedumela elihle kakhulu lokuthola amanani ashibhe kakhulu. Uma ufuna ukubona ukuthi isebenza kanjani kufanele Chofoza lapha.
Lufthansa, inkampani yezindiza yaseJalimane futhi okuyiyona enkulu kunazo zonke eYurophu. Kuwebhusayithi yayo ungathola izindiza ezihamba phambili ngaphakathi kokunikezwa kwayo okuhle. Chofoza lapha.
eDreams, enye yezinhlangano ezinkulu zokuhamba emhlabeni futhi enikela ngezindiza ezahlukahlukene ngamanani aphambili. Bhuka indiza yakho nabo ukungena lapha.
Noma nini lapho izinsuku zokuphumula noma zeholide zisondela, kwenzeka kithi ukuphuma esimisweni. Iyiphi indlela engcono ukwedlula ukwazi ezinye izindawo. Uma eminyakeni eminingi edlule besivila, ngenxa yokuthi kufanele sithathe uhambo olude lwezinsuku ezimbalwa, namuhla lokho akusenzeki. Ngenxa yendiza, sizobe sesifikile lapho siya khona kungekudala. Uma kule nzuzo enkulu sifaka ifayela le- izindiza ezishibhile esingakuthola kuwebhu, sizovele sibe nengxenye yamaholide ethu ahleliwe.
Amathiphu aphezulu wokuthola izindiza ezishibhile
Yiba nezimo: Enye yezinketho ezinhle kakhulu uma kuziwa ekutholeni amadili endiza, kulapho singamaki khona usuku oluthile. Lokho wukuthi, sonke siyazi ukuthi isizini ephezulu ihlobene nenyanga ka-Agasti kanye namaholide ezwe. Ngakho-ke, uma unenhlanhla yokukwazi ukubaleka ngaphandle kwabo, khona-ke ngokuqinisekile uzokonga okuningi kakhulu kunalokho ocabanga kuthikithi lakho lendiza.
Amathikithi ngokwahlukana: Kwesinye isikhathi, bhuka ithikithi ukuya emuva naphambili akusona isisombululo esihle kakhulu. Imali sizoyithola uma sigcina amathikithi ngokwehlukana. Vele, okokuqala kuzofanele ubhekisise, ngoba akuzona zonke izinkampani ezinaleli qhinga.
Izikali: Yize i- ukuma ohambweni Zingaba wuhlupho olukhulu, kulokhu, zingaba yinsindiso yethu. Lokhu kungenxa yokuthi intengo yayo yehle kakhulu.
AmahoraNgaphandle kokungabaza, amahora nawo angathinta ephaketheni lethu. Uma ungajahile ukuthola usuku oluthile, ngokuqinisekile nesikhathi ngeke sibe yisithiyo. Ngakho-ke, ungagcina i- izindiza eziphansi uma ukhetha into yokuqala kakhulu ekuseni noma ebusuku. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi amanani abe ngaphansi kancane. Udinga nje ukukuhlola!
UJanawari, uFebhuwari noNovemba babe yi izinyanga ezishibhile zokuhamba. Ngakho-ke, ungahlala ubheka izinsuku zabo futhi wenze ukubhuka ngaleso sikhathi. Vele, uma unezinsuku zokuphumula, ungahlala ushintsha okuncane lelo holide onalo engqondweni.
Ungayibhuka kanjani indiza online
Bhuka indiza online, Ngomunye wemisebenzi wonke umuntu angayenza, ngisho nangaphandle kokuba nombono omkhulu nge-intanethi. Ngaphezu kwalokho, ungagcina abalamuli, ukulinda nezinye izinqubo. Awucabangi ukuthi kufanele?
Okokuqala, okungcono kakhulu esingakwenza ukufuna i- a othole indiza njengalawo esikushiye ekuqaleni kwalesi sihloko. Lapho singakhetha kokubili usuku nendawo esifuna ukuyivakashela futhi sizothola uchungechunge lwezinketho, ezi-ode ngamanani azo nezinkampani zezindiza. Umsebenzi olula kakhulu esizoba nawo ngaphambi kwethu ngendaba yemizuzwana.
Njengezinjini zokusesha ungasebenzisa zombili iSkyscanner neRumbo noma iDestinia, phakathi kwabanye. Zonke zizokusiza amanani entengo amahle kakhulu ezinkampani eyaziwa kakhulu. Usezandleni ezinhle !.
Lapho sesikhethiwe, ukuvivinya okulula kokwazi kuqala kumele sibhukhe nini. Njengoba sihlela iholide, asikwazi ukufika nokugibela. Cha, ngoba sidinga ukulungisa intengo kancane. Ukwenza lokhu, okufanele ukwazi ukuthi, njengomthetho ojwayelekile, cishe amasonto ayisikhombisa ngaphambi kokuba intengo yamathikithi izobe ishibhile cishe ngo-10%. Vele, uma sishesha kakhulu, kufanele wazi ukuthi ithikithi ngosuku olufanayo lokuhamba kungenzeka ukuthi lenyuke ngentengo kuze kufike ku-30% ngaphezulu.
Lapho usuthathe izinyathelo eziyinhloko zokusesha, ukukhetha nokukhetha indawo oya kuyo. Manje kusele kuphela ukwenza ukubhuka uqobo. Uma usuqedile, bazokuthumela i-imeyili yokuqinisekisa eposini ohlinzekile. Inombolo yakho yethikithi nekhodi yakho yokubhuka izovela lapho.
Ziyini izinzuzo zokubhuka indiza online?
Siyazi ukuthi kuningi izinzuzo zokukwazi ukubhuka indiza online. Ngaphandle kokungabaza, induduzo yinto ezohlala ihamba nathi. Akufani ukuya kwi-ejensi futhi uchithe usuku lonke lapho kunokuhlala kahle kusofa ekhaya. Vele, ngaphezu kwalokho, sinabanye okufanele kushiwo.
Ulwazi: Impela imininingwane inabe kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi ngenxa yezinjini ozokwazi ukuzenza qhathanisa nezinkampani ezahlukene, kanye nokujabulela izindawo eziningi nakho konke odinga ukukwazi.
Awekho amashejuli: Ungakhathazeki uma uchitha usuku lonke usebenza futhi lapho ufika, i- ejensi yokuvakasha ivaliwe. Phefumula, phumula kancane, bese uvula ikhompyutha. Lapho uzothola konke okufunayo. Ungayikopisha noma uyibuyekeze ngosuku olulandelayo uma ufuna ukubukeka okusha.
Amanani: Njengoba kade siphawula, into ehlala ikhathaza amanani entengo. Kulokhu, ngeke kube khona abaxhumanisi futhi singahlala sihlangana nalabo ngaphezu kokunikezwa okuzuzisayo. Vele, khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele uqiniseke ngenani lokugcina, uma nje zonke izimali ezihambelana nazo sezifakiwe. Noma kunjalo, ngokuqinisekile kuzoba eshibhile online.
Uma ufuna hamba uye eLondonNgemuva kwalokho kufanele wazi ukuthi ukuthola izindiza ezishibhile, kuzodingeka wenze ukubhuka kwakho cishe amasonto ayisikhombisa ngaphambi kohambo. Ngalokhu, ungonga cishe i-20% yentengo. Vele, ngalokhu, sihlala sikweluleka ukuthi uqale ubheke ngokushesha futhi ngaphezu kwakho konke, ukuthi uqhathanise. Uhambo lwendiza olungabizi kakhulu lungoMeyi nangoSepthemba.
Uma ukhethe ukuthandana, mhlawumbe IParis ibe yindawo yakho engcono kakhulu. Indawo lapho ungathola khona izindawo ezinhle. Ukuze uhlale ubakhumbula hhayi, ngoba bekuyindiza ebizayo, ungaqala-ke ukwenza ukubhuka kwakho emasontweni ayishumi ngaphambi kohambo lwakho. Izinyanga ezinhle kakhulu zokubona iParis ziyizinyanga zikaSepthemba nezika-Okthoba.
Izindiza ezishibhile eziya eRoma
Uma ufuna vakashela iromaKuzofanele futhi ukuthi ubhukhe ithikithi lakho lendiza kusasele inyanga nohhafu ngaphambi kwesikhathi. Ngale ndlela uzothola amanani angabizi kakhulu. Futhi, khumbula ukuthi uMeyi noJuni izinyanga eziphelele, ezinesidingo esiphansi.
Izindiza Zomnotho ziya eMadrid
Thola a indiza eya eMadrid kuyinto ejwayelekile futhi elula. Zonke izikhumulo zezindiza zixhunywe kuyo. Ngakho-ke, impela uzokwazi nokuthola kaningana nangezikhathi ezihluke kakhulu. Kungcono ukuhlala kude namahora nezinsuku eziyinhloko njengoLwesihlanu noma uMsombuluko ngoba amanani aqinisekile ukuthi azokhuphuka kakhulu.
La i-ciudad condal futhi ixhunywe kahle kakhulu. Zombili zinezindiza ezindiza ezweni noma emhlabeni jikelele. Ngakho-ke ukuya kuyo akuyona inkinga. Kwesinye isikhathi uyothola uhambo oluthile nokuma kwabo, kepha kuhle ngaso sonke isikhathi ukuthatha ithuba ukubona ukuthi singonga yini ama-euro ambalwa. Khetha isikhathi lapho kunokuthutheleka okuncane futhi uzobona ukuthi kushibhile kanjani kunendlela ocabanga ngayo.